မိမိတို့သည် နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုအင်အားအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဟု ဘဘဦးဝင်းတင် ပြောကြား
ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ လူထုဦးလှကွယ်လွန်တော့ အမှတ်တရစာအုပ်မှာ ကျနော် စာရေးခဲ့ဖူးတယ်။ လူထုဦးလှရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ၊ တူတာ မတူတာတွေတွေ့ကြတဲ့နေရာမှာ၊ ရန်သူတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင် သူက အမြဲကြိုးစားတယ်။ အဲသည်လိုမျိူး သူက Catalyst ဖြစ်တယ်။ ကျနော် ထောင်က ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်က ပြောဖူးတယ်။ ကျနော်ဟာ လူထုဦးလှလိုမျိူး Catalyst မျိုးဖြစ်အောင် ကျနော်က မကျင့်သုံးနိုင်ဘူး၊ မကြိုးစားနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော့်ရဲ့ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မျှော်လင့်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါမျိုး ပြောခဲ့ဘူးတယ်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုမောင်ရစ် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, October 16, 2010 Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ.. (အပိုင်း..၃)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ (အပိုင်း..၃)
၁၉၉၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ ( ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံနှစ်ပါတ်လည်နေ့ ) အန်တီစုရဲ့နေအိမ်မှာ ကျနော်တို့ ( တကသ ) ကျောင်းသားတွေနဲ့ အန်တီ တွေ့ဆုံပြီး ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ် စကားဝိုင်းလေး ကျင်းပကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေက စုစုပေါင်း ၃၀ လောက်ရှိမယ်။ ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြား ကနေဒါနိုင်ငံက ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းပါသဗျ။ သူကတော့ ကျနော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး နားမလည်သည့်တိုင်အောင် စိတ်ရှည်စွာထိုင်ပေးတယ်။ အဲဒီနေ့က တကသ ရဲ့ ဗမာလို။ အင်္ဂလိပ်လို ကြေငြာချက်ကို ဖတ်ပြတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကြေငြာချက်ကို ဦးဝင်းထိန်ကဖတ်ပြတယ်။ အဓိက အချက်ကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်တော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှသည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆီသို့ ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ပါပဲ။ ဒီနေ့ကစလို့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ အန်တီစုအပါဝင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များနဲ့လက်တွဲပြီး ဒီဦးတည်ချက်ကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွှက်ဖို့ သံဓိဌာန် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးချက် အခွေကို အသံဖမ်းထားပြီး တိတ်ခွေကူးဖြန့်ခဲ့တာ တော်တော်ပြန့်သွားပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ခွေကလည်း ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကာဗာပုံတွေ ဘာတွေနဲ့ တော်တော်သားသားနားနားပါ။ အန်တီစုနဲ့ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေစုရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကာဗာလုပ်ထားတာ။ အမှန်က အဲဒီကာဗာက ဓါတ်ပုံကို တိတ်ခွေနဲ့ အံကိုက်လုပ်ပြီး ခေါက်ထဲ့ထားတာပါ။ အန်တီတောင်မှ အဲဒါကိုတွေ့သွားပြီး တော်တော်အံအားသင့်သွားတယ်။ ဒီအခွေ ကတော်တော်ပြန့်သွားတာကို အန်တီလည်းသိတယ်။ ဒါနဲ့ အန်တီက ကျနော့်ကိုပြောတယ် ၊ နောက်ထပ်တခါ ထပ်လုပ်မယ်တဲ့ သားမေးခြင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အန်တီကိုကြိုပေးထား သေသေချာချာ ထပ်လုပ်ရအောင်တဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အန်တီကလည်း ကြားထဲမှာမအား ၊ ကျနော်လည်း သိပ်မကြာခင်ပဲ အဖမ်းခံရပြီး ဒုတိယအကြိမ်ထောင်ထဲဝင်သွားရလို့ပါ။
ပြောမယ်ဆို အဲဒီတိတ်ခွေကို နေ့ညမအား ကူညီဆောင်ရွှက်ပေးရှာတဲ့ ( ရုရှားပြန်- ကိုစောနု ) သူက လှည်းတန်းမှာ အဆိုသင်တန်းဖွင့်ထားတာ ၊ နံမည်ကြီးပါတယ်။ နံမည်ကျော်ပန်းချီ ပညာရှင် ချောအိသိမ်းက ဆက်သွယ်ပေးရင်းက သိရတာ သူ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကဘယ်လောက် စိတ်အားထက်သန် သလည်းဆိုရင် သူ့သင်တန်းပေးရေး အလုပ်ကိုတောင်ပစ်ပြီး ကျနော်တို့ကို ကူညီခဲ့တာ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ယောက်က လက်ရှိအခြေအနေထိ ဗမာပြည်မှာ နံမည်ကြီးနေတဲ့ စတီရီယိုအဆိုတော်တစ်ဦး ( နံမည်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရ မပြောတော့ပါဘူး ) သူဆို သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ စိုက်ထုတ်ကူး ဖြန့် အဲသလိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူဖြန့်ခဲ့တာ အခွေပေါင်းကိုမနည်းပါဘူး၊ပြောရရင်တော့ အသေးအဖွဲကစ ကူညီခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပါ။ နောက်အရေးကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်က နံမည်ကြီး ဟစ်ဟော့ အဆိုတော် ဘာဘူ နဲ့ နံမည်ကြီး မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် သန္တာလှိုင်တို့ရဲ့ အဖေ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ပါ။ ပြောရရင်တော့ သူနဲ့ကျနော် နောက်ပိုင်းလည်းကြရော အမှု့တွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။
အန်တီက လွတ်လာခါစဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာ ကွန်ပြူတာပါ ၊ အဲဒီသတင်းကို NLD လူငယ် တစ်ယောက်ဆီက ကြားကြားခြင်း ကျနော် ဆရာ ဦးလှိုင်မြင့်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကလည်း မဆိုင်းမတွပဲ သူလှုမယ်ဆို ဆုံးဖြတ်ပြီး ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ကွန်ပြူတာတွေဝယ် ၊ လိုအပ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို သိန်းတော်တော်အကုန်ခံပြီး တောင်ကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ခင် ( ယခု - ထောင်ထဲ ) ကတဆင့် အန်တီစုကိုလှုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုလည်း တော်တော်ကူခဲ့တာပါ။ နောက်ကာလ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲသလိုလုပ်ရပ်များအတွက် အထွေထွေညှိုးချက်များနဲ့ အပြစ်ရှာထောင်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။ အမှု့ထဲမှာ အန်တီဟောပြောချက် ဗွီဒီယိုခွေတွေကို ဖြန့်ချီလို့ ( တရားမ၀င် ဗွီဒီယိုခွေတွေဖြန့် ခြင်း ပုဒ်မနဲ့ ) ထောင်ချတာလည်းပါပါတယ်။ အန်တီစုကို ၀န်းရံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် ဒီလိုလည်း နှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သဘောကတော့ မ၀န်းရံရဲအောင်ပေါ့ ပြောမယ်ဆို ဆရာ ဦးဝင်းတင်ပြောသလို “ အစာလည်းမကျေ ကမ္ဘာလည်းမကြေ ” ပါပဲ။
“ ငါ့ဖာသာ ငါဘာနားထောင်ထောင်ပေါ့ဟဲ့…..ဒါ ဒီမိုကရေစီပဲ ” မဲ့ရွှဲ့သွားပြီး
“ နင်တို့က စုံထောက် တွေလား ”
“ ငါက အရပ်ထဲက ကောင်စီတွေလည်း အပြတ်ပြောထားတာ ( အမှန်ကတော့ ရ-၀-တ ကိုပြောတာပါ ) ဖမ်းခြင်ဖမ်း ကျုပ်ကတော့ သွားမယ် …. စုစုမျက်နှာလေး တစ်ပတ်တခါမမြင်ရရင် မနေနိုင်ပေါင် ” သာမာန်ပြည်သူတယောက်ရဲ့ ရင်ထဲက ရိုးသားစွာထွက်လာတဲ့ အသံတွေပါ။ နောက်သူက ၉၀ ပြည့်နှစ်ရွှေးကောက်ပွဲကာလက သူရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု့ အကြောင်း ( စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းပါတယ် ) သူ သမီးက အကြော်ရောင်းတယ် ။ သူ့ဆိုင်က လမ်းဘေးမှာတဲလေးထိုးပြီးရောင်းရတဲ့ဆိုင်ပါ။ မိသားစုပြေလည်ရုံပဲ ၀င်ပါတယ်။ ၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခါနီးတော့ သူကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်တယ်။ အကြော်ရောင်းနေတဲ့ သူ့သမီးကိုပြောလိုက်တယ် ငါ့ကို ရွှေးကောက်ပွဲမပြီးမခြင်း မုန့်ဘိုးပိုက်ဆံမပေးနဲ့တော့ အဲဒီအစား ငါ့ကိုအကြော်ပဲပေးဆိုပြီး ၊ အဲဒီအချိန်က သူကဘယ်လို မဲဆွယ်သလည်းဆိုတော့ သူ့သမီးဆိုင် အကြော်လာဝယ်သူတိုင်းကို စုစု ပါတီကို မဲပေးရင် အကြော်တစ်ခု အပိုပေးမယ် ဆိုပြီး အဲသလို မဲဆွယ်ခဲ့တာ (ဘယ်သူကမှ ခန့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ NLD ရဲ့ စည်းရုံးရေးမှုးကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။) ကျနော့်ကိုတစ်ခုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ - အဲဒီအဖွားအို နာမည်ကို လုံးဝကိုဖော်လိုို့မရလို့ပါ။ အဲဒီအချိန်က အန်တီခြံရှေ့ဟောပြောပွဲတွေမှာ အမြဲရောက်နေတယ့်သူတွေ မှတ်မိကြမှာပါ။ ဒီအဖွားလို ပြည်သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံရေးကိုနားမလည်းဘူး ၊ သမိုင်းတင်ဘို့ကို စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ စစ်အာဏာရှင်ကို မကျေနပ်ချက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ခင်စိတ်၊ လေးစားရိုသေစိတ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရစီနိုင်ငံတော် ဖော်ဆောင်ရေးကို တတပ်တအား ပါဝင်ကြတယ်။ သူတို့ခံယူချက် ရပ်တည်ချက်က ပြတ်သားတယ်၊ နှစ်ဘက်မခွဘူး၊ အကျိုးစီးပွား မမျှော်လင့်ဘူး၊ စကားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေနဲ့ ဆရာကြီးမလုပ်ဘူး ရိုးသားစွာနိုင်ငံရေးကိုယုံကြည်ကြတယ်။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေပါ။
နောက်တခုက ကမ္ဘာမှာ ဘယ်သူမှမကြားဘူးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ။ ကိုယ်ချစ်ခင်လေးစား ရိုသေတဲ့သူကို ကျန်းမာပါစေဆို ဆုတောင်း မိလို့ ထောင်နှစ်ရှည်လများ အချခံရတာ ကြားဘူးလားမသိဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပျက်ပါ။ အန်တီအိမ်ရှေ့ဟောပြောပွဲမှာ အန်တီကို “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် --- ကျန်းမာပါစေ ” ဆိုပြီး ရှေ့ကတိုင်ပေးတဲ့သူတွေကို ထောင် ၇ နှစ်ဆီ တန်းစီပြီး ချပစ်လိုက်တယ်။ စီမံချက်နဲ့ကိုချတာ။ အဲဒီအမှု့တွဲတွေကို ထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့ နံမည်ပေးထားတာ “ ကျန်းမာပါစေ အမှု့တွဲများ ” ဆိုပြီး၊ ကျနော်မှတ်မိသလောက် ဒလက ကိုဘော့လုံး ခေါ် ကိုမြဟန်၊ ကိုသန့်ဇင် (ယခု အမေရိကား ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် ) ၊ ဦးသောင်းအေး ( ဖျာပုံ ) စုစုပေါင်း ၃၀ လောက်ရှိမလားမသိဘူး။ ကျနော် အဲဒီအကြောင်း ကိုတခြားသူတွေပြောပြတော့ မယုံကြဘူး၊ နိုင်ငံခြား သားတွေကို ပြောပြရင်တောင်မှ သူတို့က စစ်အစိုးရကို မုန်းလို့ လုပ်ကြံပြောတယ်ပဲထင်ကြတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်----- ကိုကျန်းမာပါစေလို့ တိုင်မိရုံလေးနဲ့ ထောင်ချတယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး …. ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ တခြားကိစ္စဆိုရင်တော့ ဟုတ်ခြင်ဟုတ်မှာပေါ့ စသည် စသည်ဖြင့် တော်တော်များများက မယုံခဲ့ကြဘူး။ အမှန်ကတော့ တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုတာ ကာယကံရှင်များနဲ့ နိုင်ငံရေး အသိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံး သိကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ အဲသလောက် ရက်စက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဇာတ်နာအောင်ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ခမျာ မိသားစုဘ၀တွေပျက်၊ အိမ်ထောင်တွေကွဲနဲ့ ဘ၀ကိုခါးသီးစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရရှာတယ်။ ဖျာပုံက ဦးသောင်းအေးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် စိတ်ဝေဒနာရှင် သူ့သားလေးကို ဆေးကုဖို့ ရန်ကုန် စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကိုလာပို့တာ၊ အချိန်ရသခိုက် အန်တီစုဟောပြောပွဲကို လားနားထောင်ရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေဆို့ အော်ဟစ် ဆုတောင်းပေးရုံလေးနဲ့ ထောင် ( ၇ ) နှစ်အချခံလိုက်ရတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့သား စိတ်ဝေဒနာရှင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားသလည်းဆိုတာ ကျနော်လည်းမသိတော့ဘူး၊
ကိုဘော့လုံး ခေါ် ကိုမြဟန်ဆိုသူနဲ့က ကျနော်နဲ့ အင်းစိန်တွဲဘက်ထောင်တိုက်ခန်းထဲမှာ အတူနေခဲ့ဘူးတယ်။ သူစိတ်အားထက်သန်မှု့ကလည်း အထက်မှာ ကျနော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဖွားအိုလိုပဲ၊ အန်တီစုဟောပြောပွဲပြီးလို့ ဘာတွေပြောခဲ့သလည်း မေး လုံးလုံးမသိတော့ဘူး ၊ သူက အန်တီ ဟောပြောပွဲအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် -- ကျန်းမာပါစေ ဆို ရှေ့ကတိုင်ပေးရတာကို စွဲလန်းနေတာ။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ညိနေတာ။ သူ့ကိုဖမ်းတော့ အရက်နည်းနည်းလည်း မူးနေတယ် သူ့အိမ်ပြန်ရောက်သည်အထိ ထောက်လှမ်းရေးက နောက်ယောင်ခံလိုက်လာပြီး ညတော်တော်လေး မိုးချုပ်မှဝင်ဖမ်းတယ်။ ဖမ်းပြီးတော့ ထောက်လှမ်းရေးကမေးတယ်------ “ မင်း …… ကျန်းမာပါစေကို ဘယ်လိုတိုင်လည်း ….. လုပ်စမ်းပါဦး …သရုပ်ပြလေး ” ဆိုတော့ သူကရှေ့ကတိုင်ပြတယ် “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ----------- နောက်ကဘယ်သူဆီကမှအသံပါမလာဘူး ( ထောက်လှမ်ေးရးတွေပဲ ဘယ်လိုလုပ်နောက်က လိုက်ဆုတောင်းပေးလိမ့်မလည်း )၊ နောက်တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ -------- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ------ အဲဒီတော့ သူက စိတ်မရှည်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့“ ဟာ…ဆရာတို့ကလည်း ကျနော်က ရှေ့ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတိုင်လိုက်ရင် ……… ကျန်းမာပါစေဆိုတာလေး လိုက်ထောက်ပေးဦးလေ …. ဒါမှပီပြင်မှပေါ့ ” ဆိုခပ်ထွေထွေလေးပြန်ပြောလိုက်တာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေက “ အေး …. ထောက်ပေးမှာပေါ့ …. လုပ်ပါဦး နောက်တစ်ခေါက်ဆိုတော့ သူက သူလုပ်ပြတာ သဘောကျတယ်ထင်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်အော်အပြီးမှတော့----- လက်သီးတွေ၊ တံတောင်တွေ---- ဒူးတွေ ၀င်လာတော့တာပဲ။
ကိုဘော့လုံးရဲ့အဖြစ်ကလည်း ဒီလိုပါ။ ထောင်ထဲရောက်တော့ သူကကျနော်တို့ကို ရှင်းပြတာ။ ထူးခြားချက်တစ်ခုကလည်း အန်တီအိမ်ရှေ့ ဟောပြောပွဲမှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး အင်အားစု တော်တော်များများကို ပြန်ဆုံတွေ့ရခြင်းပါပဲ။ ထောင်ထဲ၊ တောထဲ နဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့သူတွေ ကလွဲရင် တော်တော်များများလောက် ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ တကသ တောင်မှ ကိုမိုးကြိုး (ယခု - ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့က အလုပ်သမားရေးတွေလုပ်နေတဲ့ JACBA အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ခံ ) နဲ့ ကိုထက်ရာဇာ ( ယခင် DVB မဲဆောက်သတင်းထောက်ဟောင်း ) တို့ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ်များ အစည်းအရုံး ( ဗကလစ ) နဲ့ ချိပ်ဆက်လက်တွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ လူငယ် ကျောင်းသားတွေ ။ တက်ကြွလှုတ်ရှားသူတွေကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပြီး နိုင်ငံရေး လှုy်ရှားမှု့တွေ တွန်းတွန်း တိုက်တိုက်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံရေးလောကနဲ့ စိမ်းစိမ်းအနေထားကနေ တကသ - ကိုဝင်ရောက် လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအချို့ ယနေ့ထက်တိုင် ပြည်တွင်းမှာ အမာခံလှုတ်ရှားစဲပါ။ ကျနော်တို့ အဓိကထား လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကတော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဉ် ------ အန်တီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်က အဲဒီသဘောတရားကို ကျနော်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးခဲ့တယ် ။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ ဘာလည်း ၊ ဘာလို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တာလည်း အဲဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို အန်တီက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ရော ရပြီးရော အချိန်ကစလို့ တမျိုးသားလုံးရဲ့ညီညွတ်ရေး တနည်းအားဖြင့် သင့်မြတ်ရေးဟာ ယနေ့ထိတိုင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့၊ ဖေဖေ ( ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ) လက်ထက်တောင်မှ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းပဲ.. ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ကြံခံ သေဆုံးသွားတော့ ပိုဆိုးသွားတော့တာပေါ့ ၊ နောက်လူတွေမှာပိုဆိုးလာတာ အခုထိပါပဲ။ ဒီလိုသင့်မြတ်ရေးမရှိပဲ တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ဘို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ( ၀န်ခံချက် - အန်တီပြောသွားတာ ဒီသဘောတရားပါ - စကားလုံးအားဖြင့်တော့ တိကျခြင်မှတိကျပါလိမ့်မယ် ) ဒီကိစ္စကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားကြရမှာပါ။
ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်လိုသင့်မြတ်ရမှာလည်း ? ဒါ့ရဲ့ အဖြေကတော့ ယနေ့တိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ - NLD အပါဝင် အတိုက်အခံအင်အားစုတွေရယ်။ လက်ရှိ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ ညီညွတ်ရေး ၊ သင့်မြတ်ရေးပါ။ ကျနော်တို့အဖို့ကတော့ ဒီလောက်ခက်ခဲပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြေရှင်းခဲ့တာတောင် မပြေလည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာကိုကြိုးစားဘို့ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုကို မက်နေရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်ချက်တခုတော့ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ဆိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကလာကြတာပါ။ အန်တီစုလို့ လူထုခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးထားတဲ့အတွက် အများကြီးတော့ အားရှိစေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွှက်ရတာဟာ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရသလိုပါပဲ။ အချိန်မရွှေးပြူတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ နောက်ဆုံး ကျနော် ထောင်ထဲပြူတ်ကျသွားပါတယ်။ တချို့ ရိုးသားစွာ ဆောင်ရွှက်ချက်တွေအပေါ် ကြီးမားစွာ အထင်မှား ခြင်းဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အန်တီစုရဲ့ အမှာစကားက ကျနော်တို့ နှလုံးသားထဲ ပဲ့တင်သံထပ်ခါ ထပ်ခါ ရိုက်ခပ်စေခဲ့ပါတယ်။
အပိုင်း ( ၄ ) ဆက်ပါမည်။
နအဖ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာတိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့လူမျက်နှာတွေအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိက ပြော
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို မဲမပေးရန် ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကိုယ်တိုင် ပြောသည့်အတွက် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ ဝမ်းသာရကြောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံခရိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှူး ဦးမြင့်စိုးက ယခု (၁၃) ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ငါးလုပ်ငန်း အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“တော်တော်အံ့သြသွားတယ်၊ ငါးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ပြောတာ၊ အဲဒီမှာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ပတ်သက်ရင် မဲမပေးဖို့ ပြောတယ်၊ ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် တခုခုအစီအစဉ်နဲ့ ပြုတ်အောင်လုပ်မယ် ပြောတယ်၊ ထည့်ခဲ့ရင်လည်း အရေးယူမယ်ဆိုပြီး ပြောတာ၊ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒီလိုပြောတော့” ဟု ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ယခင်ကတည်းက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မနှစ်သက်ကြသည့်အပြင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း မည်သည့်ပါတီကိုမှ မဲပေးခြင်းမပြုဘဲနေရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေကတော့ ဘယ်မှ မထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ၊ ကျနော်တို့ လူကြီးမပြောခင်ကတည်း စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာ၊ အခုလို ပြောတော့ ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်၊ အဓိကကတော့ ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးဖို့ အရာရှိတဦးက ဒီလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတာ” ဟုပြောသည်။
စစ်အစိုးရဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် ဝင်ရောက် အရွေးခံရန်အတွက် နည်းမျိုးစုံကြိုးစားနေလျှက်ရှိသည်။
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိန်းသည်ပင်လျှင် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရန် ကြိုးစားနေချိန် ၎င်းလက်အောက် ဌာနအရာရှိများက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲမပေးရန်ပြောဆိုခြင်းမှာ ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မဆန့်ကျင် ချင် လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင် တာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချပ် ကို တခဲနက် ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ တဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ကို မဆန့်ကျင် လိုတဲ့ အတွက် အခု ထပ်လုပ်တဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲ ကို သူကိုယ်တိုင်ကော၊ သူ့ပါတီ က ပါ မဝင်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြော ပါတယ်။
နေအိမ်ချုပ်ကျခံရတဲ့ အမှုကိစ္စ အယူခံ အတွက် သူ့ ရှေ့နေတွေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သောကြာနေ့ က သွားရောက် တွေ့ဆုံ စဉ်မှာ အခုလို စကား ကို ပြောခဲ့တာ ဖြစ် ကြောင်း သူ့ရဲ့ ရှေ့နေ တဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း က ဘီဘီစီ ကို ပြော ပါတယ်။
အခု လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီး သွားရင်လဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒ အပေါ် ကို သာ ကြည့်တဲ့ အခြေခံမူ အပေါ်မှာ သာ ခံယူသွားမည့် လို့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ပြော ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်း က ဆို ပါတယ်။
အခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကို အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေက ထောက်ခံ လိုက်ရင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကို ဆက်ကိုင်စွဲ ဖို့ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား ဆိုတဲ့ ဘီဘီစီ ရဲ့ အမေး ကို တော့ ဦးဉာဏ်ဝင်း က လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန် မှာ လူထု ဆန္ဒ အရ ဖြစ်လာသလား ဆိုတဲ့ အခြေအနေ တွေ က ပို ရှင်းလင်း သိသာ လာမယ့် အကြောင်း ဖြေကြား သွားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရပ်တည်ရေး တရားဝင်နည်းလမ်းအရ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ကိစ္စ ကြေငြာချက်(ပြည်တွင်း)
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, October 16, 2010 Links to this post
နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်မယ့်ကြံ့ ဖွတ် တွေ့ထဲမှာလဲ မဆလက လူတွေလဲပါသကွဲ့....
နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်မယ့်သူတွေ မဆလခေတ်က အာဏာရှင် နေ၀င်းရဲ့ရုပ်သေးရုပ် သမ္မတဟောင်း စန်းယုရဲ့သားမက်ဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်ဝင့်ကလည်း ဗဟန်းမြို့ နယ်ကနေ ကြံ့ ဖွတ်အမတ်အဖြစ် ၀င်ပြိုင်ဦးမတဲ့၊ မဆလ န၀တ နအဖ အစဉ်အဆက် အာဏာရူးမျိုးဆက်တွေဟာ ပြည်သူတွေကို ဆက်လက်ညဉ်းပမ်းဖို့အတူတူဘဲဆိုတာ သိမြင်စေလိုပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, October 15, 2010 Links to this post
တပ်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ကိုပဲ မဲပေးရမယ်လို့ အထက် အရာရှိတွေက ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ထားကြောင်း
ရွေးကောက်ပွဲရက် နီးလာချိန်မှာ တပ်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ကိုပဲ မဲပေးရမယ်လို့ အထက် အရာရှိတွေက ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ထားကြောင်း တပ်တွင်း မိသားစုတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကနေ သူတိုရဲ့ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတွေကို ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ထားတဲ့ တပ်ရင်းတွေထဲမှာ ဟင်္သာတမြို့က ခလရ ၁၈ လည်းပါဝင်ပြီး အဲဒီက တပ်တွင်း မိသားစုဝင် တယောက်က တပ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးရှိတာ ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
တချို့ကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
စစ်တပ်ထဲမှာ အထွေထွေ မကျေနပ်မှုတွေကြောင့် မကြာသေးခင်ကာလတွေက တချို့ တပ်ရင်းတွေမှာ အာဏာဖီဆန်မဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ခုလည်း ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကို မဲထည့်ဖို့ အမိန့်ကို ဆက်လက် ဆန့်ကျင်လာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဦးသန်းက ပြောပါတယ်။
တပ်ထဲမှာ ကျပ်တည်းမှုတွေ ဆက်ရှိနေပြီး ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုကြောင့် မကျေနပ်မှု အရင်းခံ ရှိနေကြောင်း တပ်တွင်း မိသားစုဝင် တယောက်က ပြောပြပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကပဲ တပ်ထဲက တပ်သားတွေရဲ့ စုငွေတွေကို အထက် အာဏာပိုင်တွေက လာသိမ်းသွားတာကို မကျေနပ်တဲ့ အတွက် တိုင်တန်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး ဒီကိစ္စတွေကို ခုထိ မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့သတင်းရရှိပါတယ်။
ငဝန်မြစ်အတွင်း စက်လှေ နစ်မြုပ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသော ၃ ဦးအား သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ် ငဝန်မြစ်အတွင်း အောက်တိုဘာ ၆ ရက်က ကျောင်း ကြိုပို့စက်လှေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် ပျောက်ဆုံးနေသူ ၃ ဦးအား အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ကယ် ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ သေဆုံး လျက်ရှိသည့်အနေအထားဖြင့် ပြန် လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း လူမှုဝန် ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရ သည်။
အဆိုပါ ကျောင်းကြိုပို့ ဖားကူး စက်လှေမှာ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲအချိန်၌ လပွတ္တာမြို့နယ်မှ မိုင် ၃ဝ ခန့် ဝေး ကွာသော စလူဆိမ့်ကျေးရွာမှ ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာသို့ ငဝန် မြစ်လက်တက်အား ဖြတ်ကူးမောင်း နှင်လာစဉ် ပဒဲကောကျေးရွာအနီး သို့အရောက် ရေဝဲမိကာ စက်လှေ နစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို စက် လှေပေါ်တွင် ကျောင်းပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် စလူဆိမ့်ကျေးရွာ၊ ပဒဲကော ရွာနှင့် ပိတောက်ကုန်းကျေး ရွာတို့မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ၊ ဆရာဆရာမများနှင့် မိဘ ဆရာအသင်းဝင်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်းခရီးသည် ၇၉ ဦး လိုက်ပါ လာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စက်လှေ နစ်မြုပ်မှုကြောင့် မူလတန်းပြနှင့် လုပ်အားပေးဆရာမ ၂ဦး၊ အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်းရှိ ကျောင်း သား ကျောင်းသူ ၁၄ ဦးနှင့် မိဘ ဆရာအသင်းဝင်၂ ဦးတို့ သေ ဆုံးခဲ့ပြီး မိဘဆရာအသင်းဝင်၁ ဦး နှင့် ကျောင်းသား ၂ ဦးတို့ ပျောက် ဆုံးကာ ကျန်ခရီးသည် ၅၇ ဦးအား ကယ်ဆယ်နိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်လှေနစ်မြုပ်မှုတွင် ကယ် ဆယ်ခဲ့သည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ”ဒီကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကလေးတွေကို ကယ်ဖို့ အမြန်ဆုံးစီစဉ်ခဲ့ရတယ်။ အခု ဖြစ်သွားတဲ့ စက်လှေမှာပါတာ က စလူဆိမ့်ရွာက အများဆုံးပဲ။ ပျောက်နေတဲ့ မောင်ဆပ်ပိုင်မှူး၊ မောင်ဝင်းမင်းကိုနဲ့ မလှမျိုးအေးတို့ ကိုလည်း အောက်တိုဘာ ၇ ရက် က ရေဝေ ချောင်းထဲမှာ အလောင်း ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့ တဲ့ကလေးတွေကလည်း ဒီဖြစ်ရပ် ကို တော်တော်လေး ထိတ်လန့်နေ ကြတယလို့ပြောပါသည်။ ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကို တော့ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်မှာ မြေချပါတယ်” ဟု သိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ အခြေစိုက် ခမရ ၅၅၀ တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူးအား ဝေဖန်သူ တပ်သား တစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ အခြေစိုက် ခမရ ၅၅၀ တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူးသည် သူ့အား ဝေဖန်သူ တပ်သား တစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ပြီး နောက်တန်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဖြင့် ကျန်နေခဲ့သူ ဇနီးကိုလည်း တပ်ရင်းမှ နှင်ထုတ်လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပစ်သတ်ခံရသူ တပ်သား၏ ဆွေမျိုး တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ဖြစ်တာက ပုဏ္ဍားကျွန်း အခြေစိုက် ခမရ ၅၅၀ တပ်ရင်းက တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အေးနိုင်နဲ့ တပ်စု တစ်စု အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရှေတန်းကို သြဂတ်စ်လ အတွင်းက သွားရောက်တဲ့ အခါ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ရှေ့တန်းကို သွားတဲ့ အခါ တပ်ရင်းမှူးက ကျေးရွာသားတွေကို အထမ်းသမား ပေါ်တာ ဆွဲသလို တချို့ကျေးရွာတွေက သမီးပျိုတွေဟာ တပ်ရင်းမှူးကို ပျိုတော် ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲသလို လုပ်တဲ့ အပေါ် တပ်သား ဦးရွှေသိန်းက တပ်ရင်းမှူးကို ဝေဖန်တဲ့ အတွက် တပ်ရင်းမှူးက မကျေနပ်တာကြောင့် သူနဲ့ အတူ ရှိနေတဲ့ တပ်သား ၁၀ ဦးကို မသေမချင်း ရိုက်သတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ တပ်သားတွေ ရိုက်သတ်တဲ့ အတွက် သေလု မျောပါး ဖြစ်နေတဲ့ အခါ တပ်ရင်းမှူးက သူ့ကို သေနတ်နဲ့ အသေပစ် သတ်ခဲ့ပါတယ်။”
ဦးရွှေသိန်းကို သတ်ပြီးနောက် အလောင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ကာ ဦးရွှေသိန်းမှာ လက်နက်ဖြင့် ထွက်ပြေးသွားကြောင်း အထက်သို့ အစီရင်ခံထားသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းပြင် ဦးရွှေသိန်းအား သတ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ရဲဘော် ၁၀ ဦးကိုလည်း အဆိုပါ သတင်း လုံးဝ မပေါက်ကြားရန် တပ်ရင်းမှူး အေးနိုင်က သစ္စာရည် တိုက်ထားသည်ဟု သူက ပြောသည်။
“ အဲသလို သတ်ပစ်ခဲ့တာကို မကျေနပ်တဲ့ စစ်သားတွေက သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေကို ပြောရာကနေ ဒီသတင်း ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုက ဒီသတင်းက တအားကို ပျံ့နေပါပြီ။ လူတိုင်းလိုလို သိနေကြတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဦးရွှေသိန်းမှာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ယိုးတရုတ် ကျေးရွာ ဇာတိ ဖြစ်ပြီး သူ့တွင် ၂ နှစ်အရွယ် သမီး တစ်ဦးနှင့် ဇနီး မဌေးဌေးဝင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မဌေးဌေးဝင်းမှာလည်း ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားရသည်ဟု သိရသည်။
များမကြာမှီက အဆိုပါ တပ်ရင်းမှူး ဦးဆောင်သည့် တပ်စု ပုဏ္ဍားကျွန်း တပ်ရင်းသို့ ပြန်ရောက်လာပြီးနောက် တပ်ရင်းတွင် ကျန်နေခဲ့သူ ဦးရွှေသိန်း၏ ဇနီး မဌေးဌေးဝင်းကို စခန်းမှ နှင်ထုတ်လိုက်သည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“ နှင်ယောင်္ကျားက သေနတ်ယူပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အတွက် နှင်ကိုလည်း စခန်းထဲမှာ မထား နိုင်တော့ဘူး ဆိုပြီး နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အခု မဌေးဌေးဝင်းက ယိုးတရုတ် ကျေးရွာကို ပြန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။”
ဦးရွှေသိန်း သတ်ဖြတ်ခံရသော သတင်းမှာ ယိုးတရုတ်၊ ပုဏ္ဍားကျွန်းနှင့် အဆိုပါ ဒေသအတွင်း ပျံ့နှံ့နေပြီး ဦးရွှေသိန်း၏ ဆွေမျိုးများကလည်း အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကို တတ်သိ နားလည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး နေပြည်တော်အထိ တိုင်းတန်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့ တော်လှန်ရေး၏ ရန်သူများ စားရင်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, October 14, 2010 Links to this post
အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်နေ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်နေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲပြုလုပ် သက်ကြီးတစ်ဦး သတိလစ် လဲကျခဲ့
အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်နေ့ ဆိုတာ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်နေ့ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ မနက်မှာ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက သက်ကြီး ၁၁၆ဦးတို့ကို ကန်တော့ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ အသက် ၁၀၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒေါ်နန်းလည်း တက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်နန်းက သုခုမ ရုပ်ရှင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မောင်မောင်မြင့်၊ ခင်စန်းရီ (ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်) တို့ရဲ့မိခင်၊ ပြေငြိမ်းရဲ့ အဖွား ဖြစ်ပါတယ်။ ကန်တော့ကြလို့ အပြီးမှာ ဒေါ်နန်း ရုတ်တရက် သတိလစ် သွားတာကြောင့် အရန်သင့် ခေါ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကြက်ခြေနီ ကားနဲ့ SSC အထူးကု ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင် လိုက်ကြပါတယ်။
ငါးမိနစ် စောပြီး ရောက်လာတာကြောင့် ဒေါ်နန်းရဲ့ အသက်ကို ဆရာဝန်များ ကယ်လိုက်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲသို့ သက်ကြီး ၉၉ ဦးတို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်ဟုရွှေအမြုတေ မဂ္ဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁၄/၂ ရပ်ကွက် ရွှေပြည်စိုးလမ်း အောက်ပိုင်းတွင် ငမိုးရိပ်ချောင်းကို ကာရံထားသော တာရိုးကျိုးသွား သောကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၃ဝ ကျော် နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၉ ကျောင်းသို့ ရေများ ဒလဟော ဝင်ရောက်လာ ကြောင်း သိရသည်။
ဆည်တော်ကြီးမှ ရေအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ဖောက်လွှတ်ခဲ့မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ အသက်ဆုံးရှုံးရ (သတင်း၊ဓာတ်ပုံ)
သံဃာနဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲကူ..
သံဃာတော်တွေရဲ့ အသက်ကို ပဓာနမထား ပြည်သူတွေအတွက် စွန့်စွန့်စားစားမြင်ကွင်း
ဒူးဆစ်လောက် ရေမှာ ဟန်ရေးတပြပြ လက်ချည်းဗလာ အသက်ကယ်ဝတ်စုံနဲ့
တကယ် အရေးကြုံရင် ပြည်သူအတွက် အမြဲအကာအကွယ် ပေးလှုဒါန်းနေတာကတော့ ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ရန်သူမျိုးငါးပါး မကြောက်တဲ့ သံဃာတော်တွေပါပဲ..
ဟန်ရေးတပြပြ၊ ရေနစ်မှာတော့ ကြောက်သား...
ထုံးစံအတိုင်း ရုပ်ရှင်တွေထဲကအတိုင်း ပြီးကာနီးမှ ရောက်လာကြပါတယ်..။
အပွင့်တော့ အပွင့်တွေပဲ အရန်းမီးသတ်ဆိုလားပဲ
မန္တလေးမြို့မှာ ဆည်တော်ကြီးနှင့် ဆည်တော်လေး ရေလှောင်တမံမှ ရေများ ဖောက်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ရေဘေးဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဖြစ်ပုံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၁ရက်နေ့ညက ဆည်ကျိုးတယ် ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက အနီးအနားရွာများအား တမင်သတင်းလွှင့် ကြေငြာပါတယ်... အမှန်တကယ်မှာ ဆည်ကျိုးခြင်းမဟုတ်ပဲ ဆည်တော်ကြီးမှ ရေကိုဖောက်လွှတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုပါတယ်.. ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ဆည်ကျိုးသွားပြီဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေမှ တမင်သတင်းလွှင့်ပါတယ်..အမှန်မှာ ဆည်ရေလျှံတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆည်ရေကို တမင် ဖောက်လွှတ်လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်..
ယနေ့နောက်ဆုံးရ သတင်းများအရ သေဆုံးသူ အလောင်း ၁၁လောင်းရရှိထားပြီး ရေမှာ ၆၂လမ်းထိ ပြန်လည် ကျဆင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်.. ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံအနီး ဘီလူးကျေးရွာမှ အိမ် ၂၂အိမ် ရေထဲ မျောပါသွားပြီး လူ၎ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း အလောင်း၂လောင်းသာ ပြန်လည် ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်..။ ယခုအချိန်ထိ ရေဘေးသင့် ကျေးရွာများသို့ ထမင်းထုတ်နှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းများ ဝေငှမှု မလောက်မငှ ဖြစ်နေပြီး.. ကလေးငယ်များ ဝမ်းရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်..။
ပြည်တွင်းမှ ပေးပို့လာသူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Thursday, October 14, 2010 Links to this post
Labels: မျှဝေခြင်း, သတင်းဓာတ်ပုံ
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်းပိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ရေလွတ်ရာသို့ ယာယီရွှေ့ပြောင်းသူများမြင်ကွင်းပုံရိပ်
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများ၌ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်နေ့များက ရေကြီးရေလျှံမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် နည်းတူ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၊ ၁၂ ရက်နေ့ များတွင်လည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွား လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ နှင့် ၉ရက်နေ့များက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြင်ဦးလွင်၊ ပုသိမ်ကြီး၊ မန္တလေး၊ အမရပူရမြို့ များ အနီးတစ်ဝိုက်၌ စံချိန်တင်မိုးရေချိန်များဖြင့် မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆည်များ၊ချောင်းများ၊အင်းအိုင်များရေပြည့်ရေလျှံမှုများဖြစ်ကာမန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိရပ်ကွက်အများအပြားတွင်လည်း ရေလွှမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်မှစ၍ မိုးရွာသွန်းမှု ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတွင် မိုးရွာသွန်းခြင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်ရာ မတ္တရာမြို့နယ်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ တံတားဦးမြို့နယ်များ၌ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၌ မိုးဆက်လက် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ မန္တလေး၊ ပုသိမ်ကြီး၊ အမရပူရ၊ တံတားဦး၊ မတ္တရာ၊ စဉ့်ကူး၊ စဉ့်ကိုင်၊ မြစ်သား၊ မြင်းခြံစသော မြို့နယ်များအပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ ညောင်ပင်ဝန်း၊ မုံရွာ၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ ပခုက္ကူ၊ မင်းဘူး၊ ရေနံချောင်းစသော မြို့နယ်များတွင်လည်း ရေကြီးရေလျှံမှု များရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ည ၂ နာရီမှာ ဘောင်ကြီးတံတားကို ရောက်တယ်။ ရောက်တော့ လမ်းမပေါ်ရေတွေ လျှံနေတဲ့အတွက် သွားလို့မရတော့ဘူး။ ရေပြန်ကျတဲ့အထိ စောင့်ရုံပဲရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ တခြား ကုမ္ပဏီကားတွေနဲ့ စဉ့်ကူးလိုင်းကား တွေလည်း ရေပြန်အကျကို စောင့်နေကြတယ်"ဟု ငါးအိုးရွာသို့သွားမည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
မန္တလေး-မိုးကုတ် ကားလမ်းပိုင်း မတ္တရာမြို့နယ်အတွင်းသာမက စဉ့်ကူးမြို့နယ်အတွင်း၌လည်း ကားလမ်းပေါ်တွင် ရေလျှံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မိုင်တိုင် ၃၇ တွင်ရှိသော တရော်ပင်ကျေးရွာ၊ မိုင်တိုင် ၄၂ တွင်ရှိသော ညောင်ဝန်းကျေးရွာ၊ မိုင်တိုင် ၄၉ နှင့် ၅၀ အကြားရှိ လက်ပံလှတို့တွင်လည်း ရေကြီးရေလျှံလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်မှစ၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မတ္တရာမြို့နယ် မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၄ မိုင် ၇ ဖာလုံရှိ ဘောင်ကြီးတံတားမှ မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၅ မိုင် ၇ ဖာလုံရှိ တံငါတံတားအထိ ရေပြင်အကျယ် တစ်မိုင်ခန့် ရေလွှမ်း မိုးမှုကြောင့် မန္တလေး-မိုးကုတ် ကားလမ်းကို ယာယီရပ်နားထားရကြောင်း သိရှိရသည်။
"ရေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးရက်လောက်ကတည်းက စတက်လာတာပါ။ ကားလမ်းပေါ် ရေမကျော်သေးတော့ သွားလို့လာလို့ ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်လောက်က စပြီးရေကတက်လာတော့ လမ်းတွေပါ ကျော်သွားတယ်။ လမ်းမပေါ် အနက်ဆုံးနေရာမှာ ငါးပေလောက် အထိရှိတယ်။ ရေစီးကလည်းသန်တော့ လမ်းမပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ တချို့ ယောက်ျားကြီးတွေ ရေထဲဖြတ်သွားတုန်း ဟန်ချက်ပျက်ပြီး မျောသွားလို့ လိုက်ဆယ်ရတာတွေရှိတယ်။ အခုတော့ စက်လှေတွေကိုပဲ အသုံးပြုပြီး သွားနေရတယ်။ ဘောင်ကြီးတံတားနဲ့ တံငါးတံတားအကြား လူတစ်ယောက် ကို စက်လှေခ ကျပ် ၁၀၀၀ ပေးမှရတယ်"ဟု ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူ မီးသတ်ရဲဘော် တစ်ဦးက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ရေများတက်လာသည့်အတွက် ဘောင်ကြီးချောင်းဘေးတွင် ယာယီတဲများဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ စားသောက်ရေးအတွက် မတ္တရာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များမှ ဆန်များ၊ ထမင်း ထုပ်များ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
"လက်ပံလှမှာ လက်ပံလှ စည်ပင်သာယာဈေး အပါအ၀င် အိမ်ခြေ ၃၀၀ လောက် ရေနစ်မြုပ်သွားတယ်။ ပိုဆိုးတာက လက်ပံလှအ၀င် ပြည်စိုးအောင် ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ တံတားတစ်စင်းနဲ့ နံကပ်နှစ်ထပ်အိမ်တစ် လုံးရေထဲပါသွားတယ်"ဟု လက်ပံလှမှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
မန္တလေး-မိုးကုတ် ကားလမ်းအပိုင်း မတ္တရာမြို့နယ်အတွင်းတွင် သြဂုတ်လအတွင်းက တစ်ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းက တစ်ကြိမ်ရေ လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုဖြစ်ပွားသည့် ရေလွှမ်းမိုးမှုသည် ယခင်အကြိမ်များ ထက် များပြားကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိကာလသည် မိုးလွန်ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မိုးလွန်ကာလအတွင်း မုန်တိုင်းနှင့် မိုးကောင်းခြင်းတို့အပေါ်တွင် မူတည်၍ ဒေသအချို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများကို ကြုံတွေ့လာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ပထမပတ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြုံတွေ့ရသည့်နည်းတူ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်လည်း ယင်းသို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညနေခင်းမှ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ခင်းအထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် မိုးများ အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခဲ့ခြင်း နှင့် အထက်ပိုင်းဒေသများ၌ မိုးကောင်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်၊ ဇော်ဂျီမြစ်၊ မူးမြစ်၊ ပန်းလောင်ချောင်းတို့တွင် ရေလျှံခဲ့သည်။ ကင်းတားဆည်၊ ငပြောင်းဆည်တို့တွင်လည်း ရေထုထည်များလာမှုကြောင့် ရေလွှတ်ပေးခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆည်ခရိုင် မြစ်သားမြို့နယ်နှင့် အမရပူရမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ရေနစ်မြုပ်ခြင်း၊ ကူမဲမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်များသို့ ရေများ ၀င်ရောက်ခြင်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်း၊ နေပြည်တော်-မန္တလေး ရထား လမ်းပိုင်းရေကျော်ခြင်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်း ရေကျော်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထူးခြားမှုအနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်း မြစ်စသော မြစ်ကြီးများ၌ မြစ်ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ပဲခူးမြစ်နှင့် ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်တို့တွင်သာ စိုးရိမ်ရေမှတ် ရောက်ရှိခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက်သို့ နှစ်ကြိမ်တိုင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တို့တွင် အသီးသီး ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်သည် ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှ ကြုံတွေ့လာရသည့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ပြားသည့်ဖြစ်စဉ်များကို ထပ်မံကြုံ တွေ့လာရခြင်းဖြစ်ကာ မြစ်ကြီးများ တွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းများအစား မြစ် ငယ်များ၊ ချောင်းများတွင် ရေကြီး ရေလျှံခြင်းများ၊ လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီးခြင်းများ များပြားသည့် နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းသည် လာနီညာနှစ်ဘက်သို့ ယိမ်းနေသည့် အနေအထားတွင်ရှိလာပြီး မိုးလွန်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု၊ မိုးများမှု စသည်တို့ ကြုံတွေ့လာရကာ အောက်တိုဘာလ ပထမပတ်အတွင်း စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် မုန်တိုင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုများကြောင့်လည်း အလယ်ပိုင်းဒေသ၌သာမက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများတွင်ပါ မိုးသည်းထန်ခြင်းများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းတွင်လည်း မိုးလွန်မုန်တိုင်းကို ကြုံနိုင်ခြေရှိသည့်အတွက် မုန်တိုင်းနှင့် မိုးများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော သက်ရောက်မှုအချို့ကို ကြုံရနိုင်သည်ဟု news-eleven. ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, October 13, 2010 Links to this post
ကမ္ဘာကျော် အကျဉ်းသားအများစု အာရှတွင် ရှိသည်
တချို့မှာ အကျဉ်းကျနေဆဲဖြစ်ပြီး တချို့က သေဆုံးသွားကြပြီ ဖြစ်သည်။
ပူပူနွေးနွေး နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လျူရှောင်ဘိုကို ထိပ်ဆုံးတွင် တွေ့ရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒုတိယ နေရာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လျူရှောင်ဘို (Liu Xiaobo) (၁၉၅၅ - )
ယခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရှင်။ မကြာခဏ ထိန်းသိမ်းခံရသူ လျူ သည် ယခု ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ကျခံနေရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၁၉၄၅ - )
ပြီးခဲ့သည့် အနှစ် ၂၀ အတွင်း ထိန်းသိမ်း ခံနေရသည့် အချိန် ကာလပေါင်းမှာ ၁၅ နှစ် ရှိသည်။
တောင်အာဖရိက ခေါင်းဆောင် မင်ဒဲလား (၁၉၁၈ - )
လူဖြူအစိုးရက သူ့ကို ၂၇ နှစ် ကြာ ထောင်ချခဲ့သည်။
အကျဉ်းကျစဉ် လူဖြူအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ထောင်မှ လွတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည်။ အနိုင်ရပြီး သမ္မတ (10 May 1994 – 14 June 1999) ဖြစ်လာသည်။
အိန္ဒိယခေါင်းဆောင် မဟတ္တမ ဂန္ဒီ (၁၈၆၉ - ၁၉၄၈)
ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ထိန်းသိမ်းခံရသည်။
အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ်တွင် လုပ်ကြံခံရသည်။
မာတင်လူသာကင်း (၁၉၂၉ - ၁၉၆၈)
ပြည်သူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကြိမ် ၃၀ ခန့် ထိန်းသိမ်းခံရသူ ဖြစ်သည်။ အသက် ၃၉ နှစ် အရွယ်တွင် လုပ်ကြံခံရသည်။
အမေရိကန်တွင် နှစ်စဉ် ဇန်န၀ါရီလ၏ တတိယမြောက် တနင်္လာနေ့ကို မာတင်လူသာကင်းနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
Andrei Sakharov (၁၉၂၁ - ၁၉၈၉)
ဆိုဗီယက် နျူကလီးယား သိပ္ပံပညာရှင်၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ။
ချက်ခေါင်းဆောင် ဗားကလက်ဟာဗဲလ် (၁၉၃၆ - )
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အာဏာရှင် အစိုးရ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းသူ။
အီရန် စာနယ်ဇင်းသမား Akbar Ganji (၁၉၆၀ - )
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ အစပြုပြီး ၆ နှစ်ကြာ အကျဉ်းချခံရသည်။
ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရေးသမား အကွီနို (၁၉၃၂-၁၉၈၃)
ထောင်ထဲတွင် ၇ နှစ်၊ ပြည်ပတွင် ၃ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်တော်ပြန်သည့်နေ့ လေယာဉ်ပေါ်မှ အဆင်းတွင် ပစ်သတ်ခံရသည်။ သူလုပ်ကြံခံရမှုကြောင့် လူထု အုံကြွပြီး အာဏာရှင် မားကို့စ် အစိုးရ ပြုတ်ကျသည်။ သူ၏ ဇနီး ကိုရာဇန် အကွီနိုလည်း နိုင်ငံရေး လောကသို့ ၀င်ရောက်သည်။
ဗီယက်နမ် ခေါင်းဆောင် ဟိုချီမင်း (၁၈၉၀ - ၁၉၆၉)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တနှစ်ကျော်ကြာ အကျဉ်းကျခဲ့သည်။
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း တရွက်ကို ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းနဲ့ ကူးယူရမယ်လို့ ရပ်ကွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြော
လူ ၁၀ ဦးပါတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း တရွက်ကို ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းနဲ့ ကူးယူရမယ်လို့ ရပ်ကွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြောနေတာကြောင့် ငွေအမြောက်အမြား ကုန်ကျမယ့်အရေး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီ တော်တော်များများ အခက်ကြုံနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခမဲ့ ကူးယူခွင့်ပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီကို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) က တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ စာရင်းကို ဘာကြောင့် အခမဲ့ မပေးနိုင်တာလဲ။ အခမဲ့ မရနိုင်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော ဘယ်လို အခက်ကြုံနေသလဲဆိုတာ ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ကြမယ့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အတွက် မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ စာရင်းကို ရဖို့က အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီစာရင်းကိုရမှ မဲပေးကြဖို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေဆီကို ပါတီတွေကနေ ဖိတ်ဖို့ လုပ်ရပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းက မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းကို ပါတီတွေအနေနဲ့ အခမဲ့ ကူးယူခွင့် ရပါတယ်။ အခုတော့ လူ ၁၀ ဦး အမည်စာရင်းပါတဲ့ စာရွက်တရွက်ကို ကျပ် ၂၀၀ နဲ့ ကူးပေးမယ်လို့ ရပ်ကွက် ကော်မရှင်ရုံးတွေက ပြောနေလို့ နိုင်ငံရေးပါတီ အများစုက မတတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကတော့ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီကို အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ပြောပါတယ်။
“အဲဒီစာရင်းက ခါတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အခမဲ့ပေးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ၉၀ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် ကူးယူခွင့် ပေးတယ်။ စာအုပ်ပေးပြီး အပြင်မှာ ကျနော်တို့ဘာသာ ကူးယူလို့ ရတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလို ကူးယူဖို့ ကျနော်တို့ကို ခွင့်မပေးဘူး။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ နာမည်လောက်ပဲ သူတို့က ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်း မရဘူး။ သူတို့က ကူးပေးမယ်ပေါ့လေ။ တမျက်နှာဆိုတာ လူ ၁၀ ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီ တမျက်နှာကို ၂၀၀ ပေးရမယ်ဆိုတော့ ကျနော့် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုရင် လူ ၁၀၀,၀၀၀ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ကူးခ သိန်း ၂၀ ကျမယ်။
“အဲတော့ ကျနော်တို့က ဘယ်လုပ်နိုင်မလဲ။ ကျနော်တို့က ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ တင်ဖို့တောင် မနည်းလုပ်ယူရတာ။ အဲဒါတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိတဲ့အကြောင်း သူတို့ကို ရှင်းပြတယ်။ ကျနော်တို့ကို အခမဲ့ ပေးဝေပါ။ ငှားပြီးတော့ ကူးယူခွင့် ပေးပါ။ ဒီလိုမှ အပြင်ကို မငှားနိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ အဲဒီရုံးမှာ သွားပြီး ကူးမယ်။ ကူးလို့ ကြာတယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးယူမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အသံသွင်းပြီးတော့ ယူမယ်။ ကျနော်တို့ ဒီမှာ အခက်အခဲ တွေ့နေပါတယ်။ အဲဒါ အစီအစဉ် လုပ်ပေးပါဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီကို စာတင်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။”
ဦးသုဝေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကနေ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်အရွေးခံမယ့်သူပါ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ထက် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ များတဲ့ မြို့နယ်တွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ တချို့နေရာတွေဆို မဲပေးနိုင်သူ ဦးရေဟာ ၆၀၀,၀၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာရင်း ရဖို့ဆိုရင် ငွေတွေ အမြောက်အမြား ကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးအတွက် ကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသုံးစရိတ်က ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပဲ ရှိတာပါ။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း မိတ္တူရနိုင်ဖို့ ကိစ္စတခုတည်း အတွက်နဲ့ ကျပ်ငွေ သိန်း ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ချီပြီး သုံးစွဲဖို့ ဆိုတာက တော်ရုံတန်ရုံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။
လုံခြုံရေး အခြေအနေကို အကြောင်းပြပြီးတော့ မဲစာရင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်လည်း မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကြောင့် မဲစာရင်း အခမဲ့ပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီ အကြောင်းကြားစာ သူတို့ ပို့ရတဲ့အကြောင်း ဦးသုဝေက ဆက်ပြီး ရှင်းပြပါတယ်။
“သူတို့က ရပ်ကွက်တွေမှာ ဒီစာရင်းတွေ ပို့တာကိုး။ ရက်ကွက်မှာ သွားတောင်းတော့လည်း သူတို့မှာ အမိန့်က သူတို့ဆီမှာ ကူးပါ။ ဒါပဲ၊ သူတို့ကတော့ အမိန့်ပဲ။ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်းပဲ လိုက်နာတာကိုးဗျ။ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုဆိုရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ကူးပါရစေဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအရ ကူးခွင့်မပေးဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့က စာတင်ရတာ။”
အခုချိန်ထိတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဘက်ကနေ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း အခမဲ့ ကူးခွင့်ပေးမလား၊ မပေးဘူးလား ဆိုတဲ့ကိစ္စ အကြောင်းပြန်မလာသေးပါဘူး။ နောက်လထဲမှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်နိုင်ဖို့အရေး မကြာခင်တုန်းကမှ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် အချိန်အခက်အခဲအပြင် ငွေကြေး အခက်အခဲကလည်း တော်တော်ကြုံနေကြရတာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ တင်းကျပ်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေကြားမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဘောင်ဝင်အောင် ကြိုးစားနေကြရတဲ့ အချိန်မှာ ငွေကြေးချို့တဲ့မှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လျှော့ချထားပြီး အသုံးစရိတ်တွေကို အကြီးအကျယ် ချွေတာနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိနေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲထည့်ရန် အတွက် လ၀ကမှ မလုပ်မနေရ မှတ်ပုံတင် အတင်း လုပ်ခိုင်းကာ ငွေးကောက်ခံ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့တွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူများကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်ရန် အတွက် လူဝကမှ မလုပ်မနေရ မှတ်ပုံတင် အတင်း လုပ်ခိုင်းကာ ငွေးကောက်ခံနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန (လ၀က) မှ မှတ်ပုံတင်လုပ်ခ အတွက် တဦးလျှင် ကျပ် ၆၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀ အထိ ကောက်ခံနေကြောင်း ကျောက်တော်မြို့ခံတဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“လ၀က က လုပ်ခိုင်းတာပါ။ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမှာ ပါပြီး မှတ်ပုံတင် မရှိသူတွေကို လုပ်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ရှိတဲ့ သူတွေတော လုပ်စရာမလိုဘူး။ အဲဒီမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခနဲ့ လျှောက်လွှာ ဖြည့်ခ ဆိုပြီး ကျပ် ၆၀၀၀ ကနေ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ ပေးရတယ်။ မလုပ်လို့ကို မရဘူး။ အတင်း လုပ်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ယခု လုပ်ပေးနေသည့် မှတ်ပုံတင်များမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်ရန်အတွက် ယာယီသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ခရီးလွန်နေသူတွေ၊ နိုင်ငံခြားသွားပြီး အလုပ်လုပ်နေသူတွေအတွက်လည်း လုပ်ခိုင်းတယ်။ အခုလုပ်တာက အိမ်ထောင်စုစာရင်းအရ သူတို့ လိုက်ပြီး လုပ်ခိုင်းနေတာ။” ဟုသူက ဆက်ပြော သည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်ထဲမှ တချို့ကျေးရွာများတွင် မိသားစုလိုက် ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွေ့ သွားသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူတို့၏အမည်များကို ကျေးရွာ မဲစာရင်းတွင် တွေ့နေရကြောင်း ရခိုင် အမျိုးသားတိုး တက်ရေးပါတီ ကျောက်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အိမ်ထောင်စု တခုလုံး ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားကြသူများ၏ စာရင်းများပါ မဲစာရင်းတွင် ထပ်ပါလာသဖြင့် မဲမသာမူများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောသည်။
တဘက်တွင်လည်း ကျောက်တော်မြို့နယ် တွင်ရှိကြသည့် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူ မူဆလင် အမျိုးသားများကို မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခြင်း မရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်ခွင့်ရမည်ဟု သတင်း ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ကျောက်တော်မြို့မှ ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးခွင့်ပြုတာဟာ စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ လွဲချော်နေတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြလိုက်သလို ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူမဲပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ပြောလိုက်တယ်လို့ သူ့ကို ဒီကနေ့ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရှေ့နေတွေကတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ လာရောက် အကြောင်းကြားစဉ် အခုလို ပြောလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်း မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကပဲ နေအိမ်မှာ သွားရောက် အကြောင်းကြားခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါဟာ ဥပဒေကြောင်းနဲ့ လွဲချော်နေတယ်လုိ့ ပြန်လည်ထောက်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေထဲမှာ ပြစ်ဒဏ် ကျခံနေရသူများဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိမလို မဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားတာမို့ အခု သူ့ကို မဲပေးခွင့် ပေးလိုက်တာဟာ ဥပဒေအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် လွဲချော်နေတယ်လို့ ပြောကြောင်း ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေတွေထဲမှာ စကားရပ်တခု ပါတယ်။ ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသူ၊ အဲတော့ တရားရုံး တရုံးရုံးက ပြစ်ဒဏ် စီရင်ထားသူကို ဆိုလိုသည်တဲ့။ ထိုသူက အဲဒီ ချမှတ်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို မကျေနပ်လို့ အယူခံထားသူလည်း ပါဝင်သည်လို့ ဆိုတော့ ဒေါ်စုက အဲဒီအထဲ ပါနေတာပေါ့။ အခု အယူခံထားတာလည်း မကျေနပ်လို့ အယူခံထားတာ။ အဲတော့ သူက ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ဆိုတဲ့ဘက်မှာ သွားပါတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ ဒေါ်စုက သူ့မှာ Voting Right၊ မဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ အဲဒါကို ရှင်းပြလိုက်တယ်။”
ဒါ့အပြင် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို မဲမပေးဘူးလို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားတဲ့ အမှုအပေါ် အထူးအယူခံလွှာကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တရားရုံးချုပ် ရန်ကုန်မှာ ကြားနာမှာမို့ ဒီအယူခံလွှာ ကိစ္စအတွက် ရှေ့နေတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးကြည်ဝင်းနဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ ၂ ဦး ဒီကနေ့ နေအိမ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားတွေ့ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“အဓိကတော့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ကြတာနဲ့ ရေးသား လျှောက်လဲချက်ကို ဒေါ်စုကို သွားပြတာ။ အဲတော့ သူကလည်း အဲဒီဟာကို ကျနော်တို့နဲ့ ဖတ်လည်း ဖတ်ကြည့်တယ်၊ ဆွေးနွေးလည်း ဆွေးနွေးတယ်။ ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ အချက် လေးငါးချက်ပဲ ထပ်ပြီးတော့ ဖြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဖြည့်ပေးစေချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲတော့ အဲဒီ လေးငါးချက် ကျနော်တို့ဆီမှာ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်း ရှင်းပြခဲ့တယ်။”
မနှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဒီပြစ်ဒဏ်အတွက် မူလ အင်းစိန်တရားရုံးမှာ ၀င်ခဲ့တဲ့ အယူခံကိုလည်း ပယ်ချခဲ့သလို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးမှာ မနှစ် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က တင်တဲ့ အယူခံလွှာကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ပလပ်ခဲ့ဖူးတာမို့ ၂ ကြိမ်ထိ လက်မခံဘဲ ရှိထားခဲ့ပြီး အခုတော့ တရားရုံးချုပ်မှာ အထူးအယူခံလွှာ လက်ခံ မခံ ကြားနာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလည်း စစ်အစိုးရက ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အစားထိုးခဲ့တယ်လို့ ကြေညာထားပြီးကာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုရာမှာ အခြေခံဥပဒေဟောင်းကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ထောက်ပြပါတယ်။
“အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့အချက်၊ ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ၈၈ ခုနှစ်က ရပ်ဆိုင်းသွားတယ် ဆိုတာကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားသူကြီးက အမိန့်ချခဲ့တယ်။ အဲဒါက ကျနော်တို့ရဲ့ အမြတ်၊ အောင်ပွဲ၊ အဲလို ပြောနိုင်တယ်။ သို့သော် တရားသူကြီးက အဲဒီနေရာလေးမှာ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ပြီးကာမှ ပြန်ပြီးတော့ ဂကွေ့ ကွေ့ပြီးတော့ ၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၅ ခုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မူလ အခွင့်အရေးတွေပေါ့ဗျာ၊ Fundamental Rights တွေ ကန့်သတ်တာပေါ့။ လှည့်ပတ်ပြီး ထွက်သွားတာ။”
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အထူးအယူခံအတွက် လိုအပ်တာတွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးရင် အမှုကို ကြားနာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် မတိုင်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အမှိုက်ကပေး တဲ့ ဝေဒနာ
လမ်းဘေး တစ်နေရာတွင် ရေးသား ထားသည့် “အမှိုက်မပစ်ရ” ဟူသော ဆိုင်း ဘုတ် အောက် တွင် အမှိုက် ပုံကြီး ရှိနေ သည်။ လူတိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိ အနည်းနှင့်အများ ရှိနေသှောလည်း မိမိတို့ သုံးစွဲပြီး စွန့်ပစ် ပစ္စည်း အချို့ကို အလွယ် တကူ စွန့်ပစ် သည့် အလေ့ အကျင့်ကို ဖျောက် ဖျက် မရနိုင် သေးပေ။
မိမိပစ်လိုက်သော အမှိုက်တစ်စမှ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ကြီး ကြီး မားမား ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ဟု တွေးထင်သော လူမျိုး များလာ သောကြောင့် လမ်းတကာနှင့် မြောင်းများတွင် အမှိုက်များ စုပုံနေသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည်။ ထို အကျိုးဆက်ကြောင့်မြောင်း များမှာ အမှိုက်များဖြင့် ပိတ်ကာ ရေစီး ရေလာ မကောင်း တော့သဖြင့် မိုးရွာသွန်းမှု များလျှင် လမ်းများပေါ်တွင် ရေလျှံ ခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူများအနေဖြင့် အများဆုံး ကြုံတွေ့လျက် ရှိသည်။ ရေဆိုးရေညစ်များတွင် ခြင်၊ ယင် များ ပေါက်ဖွားလာကာ မလိုလားအပ်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေခြင်း စသည့်ဆိုး ကျိုးများကို ခံစားရ မည် ဖြစ်သည်။
ရပ်ကွက်တိုင်းတွင်ရှိသော ညနေ ၆နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအထိ ပစ်ရသော အမှိုက်ပုံမှာ ည ၇ နာရီ လောက်အချိန်တွင် ကြီးမားသော အမှိုက်ပုံအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ လူနေမှု ထူထပ်လာခြင်းသည်လည်း အကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှိုက်များမှာ အသုံး ပြုပြီး မလိုအပ်သော စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ထွက်သော အမှိုက်၊ ကျောင်းခန်း များမှ ထွက်သော အမှိုက်၊ လူနေအိမ်များမှ ထွက်သော အမှိုက်၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ယာဉ်များမှ ထွက်ရှိသော အမှိုက်များအားလုံးပါဝင်သည်။
အမှိုက်တွင် ဆွေးမြေ့လွယ်သည့်အမှိုက်နှင့် ဆွေးမြေ့ရန် ခက်ခဲသည့် အမှိုက်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိရာ ဆွေးမြေ့ရန်လွယ်ကူသည့် အမှိုက်မှာ တစ်ရာသီမိုးကျသည်နှင့် ဆွေးမြေ့သွားပြီး ယင်းတို့ကိုသဘာဝ မြေဆွေးအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဆွေးမြေ့ရန် မလွယ်သည့် အမှိုက်တွင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နှင့် ပလတ်စတစ်များ အဓိက ပါဝင်နေ သည်။ ၎င်းတွင်ပါရှိသော ဓာတုဗေဒ ပစဿစည်းများ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး မြေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
မြို့ပြနေထိုင်သူများ၏ အမှိုက်ပစ်မှု စနစ်နှင့်နယ်များတွင်နေထိုင်သော အမှိုက်ပစ်မှုစနစ်မှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့နေထိုင်သူများမှာ အမှိုက်ပုံရှိရာသို့ အမှိုက်များသွားပစ်ခြင်း၊ လပေးစနစ်ဖြင့်အမှိုက်များကို နေ့စဉ်လာရောက် သိမ်း၍ ပစ်စေ ခြင်း၊ စည်ပင်သာယာရေးမှ လမ်းတစ် လျှောက်တွင် တွန်းလှည်းဖြင့် လာရောက်သိမ်းသဖြင့် လမ်းဘေးတွင် စုပုံထားရှိခြင်း၊ အမှိုက်ကို အိမ်တိုင် ရာ ရောက်တွန်းလှည်းဖြင့် အနည်း အများပေါ်မူတည်ကာ ပိုက်ဆံပေး၍ စွန့်ပစခြင်း၊ စည်ပင်မှသတ်မှတ်ပေးထား သော အုတ်ကန်များတွင် ပစ်စေခြင်းစသော နည်းများဖြင့် အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။
ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာတော့ အမှိုက်ကို တွန်းလှည်းနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပိုက်ဆံပေးပြီး ပစ်ရတဲ့ အသည်တွေတော့ မရှိဘူး။ လမ်းထိပ်က အမှိုက်ပုံကိုိပဲ သွားရောက်ပစ်ရတယ်။ နေ့စဉ်မပစ် ရပေမယ့် ၃ ရက်တစ်ခါ လောက် တော့ပစ်ရတယ်။ ပုပ်သိုးပြီး အနံ့ထွက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဆိုရင် တစ်ရက်တစ်ခါပဲပစ်တယ်။ အမှိုက် ပုံကတော့ ညနေ ၆ နာရီကနေ စပစ်ရ တော့ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ နေရာက ခဏတွင်းမှာ အကြီးကြီးဖြစ် သွားတယ်။ အနားရောက်တာနဲ့ အနံ့အသက်ဆိုးရွားပြီး ကြာကြာမနေနိုင်ဘဲပြန်ပြေးရတယ်” ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ် နေ အိမ်ရှင်မ တစ်ဦးက ပြောသည်။
နယ်များတွင်မူ အမှိုက်ပစ်လျှင် ခြံများထဲတွင် တွင်းများတူးပြီး ပစ်ကြပြီး တွင်းပြည့်သွားလျှင် မြေကြီးနှင့် ပြန်ဖို့ကြပြီး လအတန်ငယ်ကြာလျှင် ၎င်းအမှိုက်ကျင်းကို တူးဖော်၍ မြေဩဇာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တချို့နယ်များတွင်မူ အမှိုက်များကို စုပုံမီးရှို့ကြပြီး တချို့မှာ လယ်ယာမြေထဲတွင် သွားပစ်၍ ချောင်းမြောင်းများ တွင်ပစ်ကြသူများလည်းရှိသည်။
“ကျွန်မတို့နယ်မှာတော့ ပလတ်စတစ်အိတ်၊ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ သိပ်မသုံးကြဘူး။ အင်ဖက်ပဲ သုံး တယ်။ အမှိုက်ပစ်ဖို့ ကျတော့ လယ်မြေ ထဲမှာပဲ ပစ်ကြတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း လယ်ထဲမှာပဲ ပစ်ကြတယ်။ မြေဆွေးအဖြစ်လည်း ရတယ်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဆိုတာကတော့ တစ်ခါ တစ်လေမှ မြို့တက်ဈေးဝယ်တဲ့ အခါ ပါလာတာဆိုတော့ အဲ့ဒီအိတ်ကိုပဲ သေသေချာချာသိမ်းထားပြီး အပြန် ပြန်ရေဆေးပြီး ပြန်သုံးကြတယ်” ဟု ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် အရိုးကုန်းကျေးရွာမှ ရန်ကုန် မြို့သို့ အလုပ်လာ လုပ်သူ မသူဇာက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်အတွင်း နောက်ဆုံးကောက်ယူခဲ့သော အမှိုက်စစ်တမ်းအရ မီးဖိုချောင် ထွက် အမှိုက်မှာ ၇၃.၂၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပလတ် စတစ်အမှိုက် ၁၇.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ခြံထွက် အမှိုက် ၃.၆၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ စက္ကူ အမှိုက်၂.၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဝတ်စ အမှိုက် ၁.၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖန် အမှိုက် ဝ.၄၅ ရာခိုင် နှုန်းနှင့် အခြား အမှိုက် ၁.၂၉ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိသည်ဟု ဩဂုတ်လ ပြည်တွင်း ဂျာနယ် တစ်စောင်၌ ဖော်ပြထားသည်။ အမှိုက် ပုံများမှ ပြန်လည် အသုံးပြုရသော ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေ စုဆောင်း ရောင်းချသူများ လည်း ရှိ နေသည်။
“ကျွန်တှောတို့ကတော့ လမ်း ဘေးအမှိုက်ပုံရှိတဲ့ နေရာတွေကို လိုက်ကောက်ပါတယ်။ အချို့ပစ္စည်း တွေကတော့ ရေဆေးပြီး ပြန်သုံးလို့ရတာတွေ ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ သံတိုသံစ၊ ရေသန့်ဘူးခွံတွေ၊ ပလတ်စတစ်ခွက် တွေရောင်းရတဲ့ ပိုက်ဆံက တစ်နေ့ ကို တစ်ထောင်ကျော်တဲ့နေ့လည်း ရှိတယ်၊ တစ် ထောင့်ငားရာလောက်ရတဲ့နေ့လည်း ရှိတယ်” ဟုလမ်း ဘေး အမှိုက်ပုံများတွင် ရောင်းရမည့် အရာများကို လိုက် ကောက်၍် ရောင်း ချသူအသက်၁၅ နှစ် အရွယ် ကလေးတစ်ဦး ကပြောသည်။
ယင်းအမှိုက်ပုံဘေးမှ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများသည် အမှိုက်ပုံမှ ထွက်သော အနံ့အသက်ဆိုးများကြောင့် နှာ ခေါင်း ပိတ်သွားသူကသွား၊ အမှိုက်ပုံကိုကျော်သွားစေရန် ခြေလှမ်းအမြန် လှမ်းသူက လှမ်းနှင့် အမှိုက်ပစ်ရန်လာသူများလည်း အဝေးမှနေ၍ အမှိုက်လှမ်းပစ်ကြသည်။ အမှိုက်ပုံတွင်မူ အမှိုက်အတွင်း ရှာဖွေနေကြသော ကလေးများနှင့် အမှိုက်များစုစည်းနေသော စည်ပင် ဝန်ထမ်းများက အမှိုက် ကို အကာအကွယ်မပာဘဲ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့နေကြသည်။
အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်း များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အရ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးက “အမှိုက်က ထွက်တဲ့ အနံ့ဆိုးတွေ ပုပ် ပြီးထွက်လာ တဲ့ အနံ့တွေက ကန့် ဓာတ် တွေပါဝင်တဲ့ အဲ့ဒီအနံ့တွေ ခဏတဖြုတ် ဖြတ်သွား ဖြတ်လာရှုရှိုက်မိ ရုံနဲ့ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တော့ ဘာ ရောဂါ မှမဖြစ်စေပါ ဘူး။ ရေမွှေးနံ့ကို ရသလို အပုပ်နံ့ကို လည်း အနံ့အသက်တစ်ခု အနေနဲ့ ရမှာ ပါ။ အကာအကွယ် မပါဘဲ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ပြီး အစားအစာတွေ စားမယ်၊ ဟိုကုတ် ဒီကုတ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင် တော့ ဘက်တီးရီး ယား ပိုးတွေက ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါ အရေပြားနဲ့ ပတသက်တဲ့ရောဂါ၊ အဓိက အူလမ်း ကြောင်း ရောဂါ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆို သည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ အညစ်အကြေး ပေါင်းစုံ စွဲကပ်စေနိုင်သဖြင့် ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ရာတွင် အကာအကွယ်များ ဖြစ်သော လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း များဖြင့်ကိုင်တွယ်ရ မည်ဖြစ်ပြီး အမှိုက်များမှ ပါလာသောအပ်များ၊ ပုလင်းကွဲများဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဂရုစိုက် ကိုင်တွယ်ရမည်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အမှိုက်သယ်ယာဉ်များ ၊ဝန်ထမ်းများဖြင့် နေ့စဉ်လိုက်လံသိမ်းယူရာ ရန်ကုန်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း သိမ်းဆည်းရရှိသော အမှိုက်များမှာ တစ်နေ့လျှင် တန်ချိန် ၁၅၀ဝ မှ ၁၆၀ဝ ကျော်အထိ ရှိပြီး လူတစ်ဦးနေ့စဉ် စွန့်ပစ်လိုက်သော အမှိုက်ပမာဏမှာ ဝ.၃၂ ကီလိုဂရမ် ရှိကြောင်း ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် အမှိုက်ကောက်ယူမှု စစ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအမှိုက်များကို လှိုင် သာယာ မြို့နယ်ထိန်ပင် သုသာန် နောက်တွင် ဧက၃၀ဝ ရှိသော မြေနေရာထားရှိ၍ တစ်ဧက နီးပါးရှိသည့် ကန်ပေါင်း ၁၂ ကန်တူးထားသည်။ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ထားဝယ် ချောင်ရှိ အမှိုက်ပစ်ရန် နေရာတွင် ရန်ကုန် အရှေ့နှင့် တောင်ပိုင်းမှ အမှိုက်များကို မြောက်ဒဂုံသို့ သွားရောက်စွန့်ပစ်စေပြီး အနောက်နှင့် မြောက်ပိုင်းမှထွက်ရှိသော အမှိုက်များကို ထိန်ပင်သို့ သွားရောက်စွန့်ပစ်သည်။
“အခု လတ်တလောမှာ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးတာ၊ ရေထွက် သယံဇာတတွေ လျော့နည်းလာတာ၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လာတာတွေကို သတင်းတွေ တီဗီတွေမှာ မကြာခဏတွေ့မြင် နေရတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းအရင်း တွေအကုန် လုံးက သဘာဝ ဂေဟ စနစ်ကြီး ပျက်စီးလာတာကြောင့် အဓိကဖြစ်တာပါ။ ဂေဟစနစ်ကြီး ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်း အရင်းမှာ အမှိုက်က အဓိက ပါဝင်နေတယ်။ မြို့တော်သန့်ရှင်းသပ် ရပ်ဖို့အတွက်နဲ့ သဘာဝဂေဟ စနစ်ကို ဒီ့ထက်ပို မပျက်စီးစေဖို့အတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေကလည်း အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်ကို ပိုမိုကောင်း မွန်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် နေရာ တွေကိုလည်း တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပြီးတော့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အမှိုက်ပုံးတွေလုံလောက်စွာ ထားရှိရမယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်း အမှိုက်ကို စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်” ဟု သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော အသင်း အဖွဲ့တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရင်ဘတ်တွေ ခံကတုတ်နဲ့ 
ဘာမျှ ဒို့ မရလိုက်ဘူး။
သွေးဆာသူ မိစ္ဆာတစုရဲ့ 
ကြယ်တွေ တစင်းပြီး တစင်း ကြွေ
သွေးတွေ တကွက်ပြီးတကွက် စွန်း…။
အတ္တတွေကို အပြိုင်ပျိုးလို့ 
သိက္ခာတွေ ရိက္ခာနဲ့ လဲ
အပြို ပြိုအကွဲကွဲ..စာရိတ္တတွေနဲ့ 
တိုင်တွေနဲ့ ..အကာတွေရွဲ့ 
End game က မရောက်…။
၂၀၀၈ ဥပဒေတွေနဲ့ - တံတိုင်းခတ်။
၀မ်း မ၀လို့ 
အသားထစ်တွေပါသွားမှာ တွေးကြောက်လို့ 
မန္တလေးမှာ လောလောဆယ် ရေကြီးနေတဲ့ အရပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အောင်ပင်လယ်၊ ကန်ပေါက်၊ မြရည်နန္ဒ ထွန်တုံး စတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ တနင်္လာနေ့ညက ရပ်ကွက်နဲ့ မြို့နယ် အာဏာပိုင်တွကေ အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ ဆည်တော်ကြီး ကျိုးတယ်ဆိုပြီး လိုက်ကြေညာတဲ့ အတွက် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူတွေ ထိတ်လန့်တကြား ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။
မန္တလေး ဒေသခံတစ်ဦးက လူတွေ ကားတွေပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေတင်လို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ် လို့ပြောပါတယ်။ နောက်မှ အဲဒီ ဆည်ကျိုးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ လိုက်ကြေညာခဲ့ပေမယ့် ပြေးတဲ့ လူတွကေ ထွက်ပြေးနေတုန်းပဲလို့ ဆိုပါတယ်။တချို့ကတော့လဲ မန္တလေး အထက်ဖက်က မတ္တရာလို ဒေသတွေကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုးက ဆက်ပြီး သဲသဲမဲမဲ ရွာနေဆဲဖြစ်တဲ့ အတွက် မနေ့က ဆည်တော်ကြီး ရေကို ထပ်ပြီး ဖောက်ချခဲ့ရ သေးတယ် လို့လဲ ဒေသခံတချို့က ပြောပါတယ်။
ဆည်ရေ ထပ်ဖောက်ချခဲ့တဲ့ အတွက် မန္တလေး မှာ ကျနေစပြုတဲ့ ရေတွေ တစ်ပေက နှစ်ပေလောက်အထိ ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့နေရာတွမှော စေတနာရှင်တွကေ ထမင်းထုတ်တွေ လိုက်ဝေပေးနေတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, October 12, 2010 Links to this post
နအဖအာကာပိုင်တွေထုတ်ထားတဲ့ငွေစက္ကူ ၅၀၀၀တန်များ အတုများထွက်ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး နအဖစစ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Tuesday, October 12, 2010 Links to this post
အကျဉ်းထောင်ထဲမှ အချုပ်သူ/သားများအား နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအာဏာပိုင်များဆောင်ရွက်နေ
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မည့် အချုပ်သူ၊ အချုပ်သားများစာရင်းအား သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့သို့ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ခါ စာရင်းများ ပြုစုပေးပို့လျက်ရှိကြောင်း အကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါစာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်များရှိသည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များရှိ ကော်မရှင် အဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး နေ့စဉ် စာရင်းပေးပို့လျက်ရှိရာ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ မဲပေးနိုင်မည့် အချုပ်သူ/သား အရေ အတွက် ၆,၀၀၀ ကျော် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ၊အချုပ်သူ/သားများသည် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အကျဉ်းသူ/သားများအနေဖြင့်မူ မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ အကျဉ်းထောင် ၄၃ ခု၊ အလုပ်စခန်းနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစခန်းများတွင် အကျဉ်းကျခံနေရ သူပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း အကျဉ်းဦးစီးဌာန စာရင်းများအရ သိရသည်။
အချုပ်သူ အချုပ်သားစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုးအလျော့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ထို့ပြင် မဲပေးခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဲပေးရမည်ကို သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ ဥပဒေအခန်း (၉) ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းပါ ပုဒ်မ ၄၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) ပါ မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ရှိနေသော်လည်း အကြောင်းခုနစ်ချက်အနက်တစ်ခုခုကြောင့် မဲရုံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆန္ဒမဲမပေးနိုင်သူများသည် ဆန္ဒမဲပေး လိုလျှင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကစီစဉ်ပေးရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
၎င်းခုနစ်ချက်တွင်ပါဝင်သည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ရဲအချုပ်စခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းစခန်းတွင် အချုပ်ခံနေရခြင်းဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းထောင်စခန်းအားလုံးမှ လွတ်မြောက်မည့် အကျဉ်းသူ/သား စာရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ကြိုတင်မဲပေး၍ရသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ထောင်အုပ်စု၊ အကျဉ်းထောင်၊ ညွှန်ချုပ်ရုံးများမှ ၎င်းတို့ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်သော လျှော့ရက်များအားလုံးပေးပြီး အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ စတင်လွတ်မြောက်မည့်သူများ စာရင်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်ကော်မရှင်သို့ အမည်စာရင်းများ ဆက်လက်ပေးပို့သွားမည်ဟုမြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, October 11, 2010 Links to this post
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ အချိန်၌ ဒါးပိန်ဘူတာ အကျော်တွင် ရထား၂ စင်းတိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်း ၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ အချိန်၌ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒါးပိန်ဘူတာအကျော် ပဲခူးတိုင်း အတွင်းတွင် ရထားနှစ်စင်းတိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားမှ သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အမှတ် ၈၀၃ ဆီတင်ကုန်ရထားတွဲနှင့် အမှတ် ၁ အဆန်စာပို့ရထားတို့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ ၀န်းကျင်းအချိန်၌ တိုက်မိခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ မီးရထားနှစ်စင်း တိုက်မိမှုကြောင့် မြန်မာ့မီးရထားမှ ၀န်ထမ်း ၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့မီးရထားမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက''ဒီနေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ အချိန်မှာ အမှတ် ၈၀၃ ဆီတင်ကုန်ရထားတွဲနဲ့ အမှတ် ၁ အဆန်စာပို့ရ ထားနှစ်စင်း တိုက်မိပါတယ်။ လတ်တလောသတင်းတွေအရ ဆီတင်ကုန်တွဲရထားက လမ်းရှောင်ဖို့အတွက် လမ်း လွှဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ကလာတဲ့ အမှတ် ၁ ရထားက ၀င်ဆောင့်တယ်လို့အကြမ်းဖျင်း သိရပါတယ်။ဒီ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မြန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်း ၃ ဦး ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်''ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒါးပိန်ဘူတာအကျော် နယ်နမိတ်သည် ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ကျန်ရထားခရီးစဉ်များကိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်း ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကြောင်း news-eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပါရှိသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လျူရှောင်ဘို(Liu Xiaobo)ရဲဇနီးဖြစ်သူလျူရှား(Liu Xia)ကို တရုတ်အာဏာပိုင်များနေအိမ်မှာအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းချထား
ရှေ့လူ နောက်တတ် နင်းလတ္တံ့
မြန်မာပြည်ထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ထဲက ထွက်ပေါ်နေတဲ့ တဘောင်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ရေတွေကြီးလာတော့ အံ့သြပြီး တဘောင်အတိုင်း ဖြစ်နေပါ လားဟ ဆိုပြီး သိမ်းထားတာလေးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အတိတ်တဘောင်တွေဆိုတာ ရံဖန်ရံခါပေါ်ထွက်တတ် သလို တိုင်းရေးပြည်ရာ အဖြာဖြာအထိ ဆိုးကောင်းတွေကို ကြိုကြိုတင်တင် နိမိတ်ထင်တဲ့သဘောလို့ မြန်မာတွေက ယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်။
၁၀ ရက် ၁၀ လ ၂၀၁၀ ဟာ ၀လေးလုံး ဆုံတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အိမ်နိမ့်စံ ဖြစ်နေရသူတွေ အမြင့်စံ ဖြစ်တော့မယ့် အခါသမယလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆင်ဖြူတော်ကလည်း ငါးကောင်တိတိ ဆုံညီသွားပြီမို့ တိုင်းပြည်တကယ်ကောင်းဖို့ ဆင်ပြောင်ငါးစီး အားမာန်တွေ စုစည်းလိုက်သလို ရှေ့မှာ အနိုင်ကျင့် စိုးမိုးထားသူတွေကို နောက်တတ် လူကောင်း လူမှန် တွေက ချေမှုန်းအနိုင်ပြန်ယူတော့မယ်နိမိတ်လို့ အဓိပ္မါလ်ဖွင့်ကြပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ကာလဆိုတာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာပြီး ဆန်စပါးထွက်ပေါ်ပြီး ပထ၀ီမြေထုထံက ရွှေစု စပါးနှံတွေ သီးပွင့်ပေးတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ (မတော်တဆ ဖြစ်တတ်တဲ့ တနေရာရာလောက်မှာ မဟုတ်ပဲ) တတိုင်းပြည်လုံး နေရာအတော်များများမှာ ရေလွှမ်းမိုးတာမျိုးဟာ တိုင်းပြည်ပျက်တဲ့ အတိတ် နိမိတ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ဖက်ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးညီညွတ်ဖို့လိုပါလိမ့် မတဲ့ဗျား..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, October 11, 2010 Links to this post
Labels: ဓာတ်ပုံ, ဓာတ်ပုံသတင်း
မြန်မာပြည်တွင်းက ဖြစ်ရပ်မှန် ကာတွန်းဟာသပဒေသာ
တိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့လူမျက်နှာတွေအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်သမဝါယမဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ် ဇလွန်မြို့နယ်တွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးရေးလုပ်နေ
သမဝါယမဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကြံ့ဖွံ့ထောက်ခံမဲ ရရေးအတွက် ဇလွန်မြို့နယ်အတွင်း စည်းရုံးမှုမျိုးစုံ ပြုလုပ်နေလျှက်ရှိသည်။ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဇလွန်မြို့ဈေးကြီးအတွင်းမှ ဆိုင်ခန်းများကို လျော့ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီး ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“ဈေးထဲက ဆယ်သိန်း ဆယ့်ငါးသိန်းပေါက်တဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေကို ကြံ့ဖွံ့က (၇) သိန်းနဲ့ ရောင်းပေးတယ်၊ အဲဒီဟာ ဝယ်မဲ့ငွေကိုလည်း အတိုး (၈) ကျပ်နဲ့ ထုတ်ချေးပေးပြီး စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်နေတာ” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါချေးငွေကို သုံးလလျှင် တကြိမ်အတိုးငွေနှင့် အရင်းငွေ ကျပ်တသိန်းကို ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်အဖြစ် လက်ခံသူများကို တယ်လီဖုန်းများ ချပေးသည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဝန်ကြီးဦးတင်ထွဋ်က လုပ်ကိုင်နေကြောင်း မြို့ခံက ပြောသည်။“ဇလွန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ကျပ်ငါးသိန်းတန်ဖုန်း အလုံး (၁၅၀) ချပေးထားတယ်၊ ဖုန်းဝယ်တဲ့သူတွေက ငွေငါးသောင်း အပိုပေးရတယ်၊ ပြီးတော့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်လုပ်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
လယ်သမားများကိုလည်း ငွေထုတ်ချေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး စုငွေအဖြစ် ငွေကြေးဖြတ်ယူ သိမ်းဆည်းထားမှုများလည်း ပြုလုပ်နေလျှက်ရှိသည်။“လယ်သမားတဦးကိုငွေ တသိန်းချေးတယ်၊ အဲဒီမှာ ဦးတင်ထွဋ်က (၈၅,၀၀၀)ရှစ်သောင်းခွဲဘဲ ပေးတယ်၊ ကျန်တဲ့ တသောာင်းခွဲကို စုငွေအတွက်ဆိုပြီး ပြန်သိမ်းထားတယ်၊ အတိုးကတော့ သုံးကျပ်နှုန်းနဲ့၊ စည်းရုံးမှုတွေကတော့ မျိုးစုံလုပ် နေတာဘဲ” ဟု မြို့ခံကပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဇလွန်မြို့တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ဦးစန်းမောင်(ယခင်ညီလာခံ တက်ဖူးသူ)၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ဦးတင်ထွဋ် (သမ၀ါယမ ၀န်ကြီး)၊ ဦးလှခိုင် (မြို့နယ်ကြံ့ဖွံ့အတွင်းရေးမှူး) တို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပြီး (တစည)ပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ဦးလှမြင့် (ကေသီပန်)၊ ဦးစန်းအေး (ယခင် မဆလပါတီမှ ပါတီဝင်ဟောင်း ကျောက်ဆေးထိုးဆရာ)၊ ဦးမြသောင်းတို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
မိမိတို့သည် နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုအင်အားအဖြစ် ဆက...
ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မဆန့်ကျင် ချင် လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင...
နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်မယ့်ကြံ့ ဖွတ် တွေ့ထဲမှ...
တပ်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ကိုပဲ မဲပေးရမယ်လို့ အထက် အရာရှိတေ...
ငဝန်မြစ်အတွင်း စက်လှေ နစ်မြုပ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ အခြေစိုက် ခမရ ၅၅၀ တ...
အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်နေ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်နေ့ကို မြန...
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်းပိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေ...
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း တရွက်ကို ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းနဲ့ ကူးယူရမ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲထ...
နအဖအာကာပိုင်တွေထုတ်ထားတဲ့ငွေစက္ကူ ၅၀၀၀တန်များ အတုမျ...
အကျဉ်းထောင်ထဲမှ အချုပ်သူ/သားများအား နအဖရဲ့ မတရားတဲ...
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ အချိန်၌ ဒါးပ...
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လျူရှောင...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ CRPP အတွင်...
မန္တလေးခရိုင်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်း၌ ရုတ်တရက် ...
နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးမှာအမတ်ကို ကန့်ကွက်ချင်ရင...